एक यौ’नकर्मी महिलाको सनसनीपूर्ण कथा «
एक यौ’नकर्मी महिलाको सनसनीपूर्ण कथा
प्रकाशित मिति : 1 October, 2020 6:59 pm
राजेन्द्र महतो/सिरहा । सिरहाको गोलबजार स्थित एक होटेल तथा लजमा भइरहेको दे’हब्यापारमा काम गर्दाको आफ्नो यथार्थ कथाको सनसनीपूर्ण खुलासा गरेकी छन् ।
गोलबजारको एक होटेलमा हाम्रा सहकर्मी राजेन्द्र महतोले १९ बर्शिय यौ’नकर्मी खुशी थापा (नाम परिवर्तन) संग गरेको प्रश्नको जवाफ फर्काउने क्रममा आफ्नो कथा खुलस्त भनेकी छन् ।
काठमाडौंको बासिन्दा खुशी थापाले आफ्नो आम्दानीको बारेमा खुलासा गर्दै आफुले ७ दिनमै झण्डै ३० देखि ४० हजार सम्म कमाउने गरेको बताइन् ।
कोरोना भाइरसको बेला यसरी गाहकहरु संग यौ’न सम्पर्क गरेपछि कोरोना सर्दैन भने प्रश्न गरेपछि कोरोना हामीलाई लाग्दैन रमाइलो र पैसा भएपछी भइहाल्यो नि, लागे पनि निको आफै भइहाल्छ बताँउछिन् ।
आफुलाई गत ६ महिना पहिला साथीले झापाको एक होटेलमा काम लगाइदिन्छु भनेर त्यँहा लगेको थियो। होटेल संचालकले ग्राहक संग यौ’न सम्पर्क गरेपछि राम्रो कमाइ हुन्छ भनेर यौ’न सम्पर्क गर्न लगाएका थिए। त्यहा १ हप्ता ग्राहकहरु सग यौन सम्पर्क गरेपछि सन्चालकले आफुलाई ४० हजार रुपैया दिएको उनले बताएकी छन् । त्यसपछि त रमाइलो र पैसा दुबै भएपछि यौ’न पेसा अपनाएकि ऊनी बताउँछिन् ।
तिमी बुढी भएपछि के गर्छौ ? अनुहारमा चाउरी परेपछि के गर्छौ ? भन्ने जस्ता व्यक्तिगत प्रश्नहरु दैनिक रुपमा आउँदा त्यसले आफुलाई आजित पार्ने गरेको उनको अनुभव छ ।
आफुले यो पेसालाई अब छोडने भन्दै कमाएको पैसाबाट टयाटु आर्टिस्ट बन्ने बताँइन।
वे’श्यालयमा आउने सबै पुरुषहरु केवल से’क्सका लागि नआउने गरेको उनको अनुभव छ । कतिपय ग्राहकहरु यौ’नकर्मी महिलासँग नजिकिन, अन्तरंग कुराकानी गर्न तथा रमाइलो गर्न समेत आउने गर्दारहेछन् ।
आफुले केही वर्ष पहिला धरानको एकजना केटासँग प्रेम विवाह गरेको खुलासा गर्दै उनले तर पछि ऊसँग डि’भोरस भएको र आफु अब अरु कसैसँग पनि बिहे नगर्ने भन्दै आफु सँग भएको पैसाले ट्याटु पसल खोलेर ट्याटु आरटिस्ट बन्ने बताउँछिन् ।
अहिले यौ’न व्यवसायलाई तिव्र रुपमा अगाडि बढाइरहेकी उनको एउटा कडा नियम छ । त्यो हो उनी क’ण्डम विना से’क्स गर्दैनिन् । ‘मेरो तथा मेरो ग्राहकको सुरक्षा यौ’न सन्तुष्टि भन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । यसमा विवाद नै छैन’, उनी भन्छिन् । उनले आफूले क’ण्डम बिना कसै संग यौ’न सम्पर्क नगरेको बताउँछिन्। निलाखबरबाट
आशा लिम्बु, काठमाण्डौ-नबिन चाम्लिङ राईको ‘प्रदेशी जिबन’ गित सार्बजनिक भएको छ । यस गित मुन्धुमस्टार